Isi Nlekọta mmekọrịta mmadụ na ibe | Martech Zone
Imirikiti ndị na-ere ahịa ghọtara mkpa ọ dị iji mgbasa ozi mmekọrịta iji soro ndị ahịa na-emekọrịta ihe, na-eme ka ndị mmadụ mara ihe ma na-eme ka ha na-eduga, mana ọtụtụ ụlọ ọrụ ka na-alụ ọgụ. Kedu ka ị si etinye atụmanya na ọkwa onwe gị, gosipụta uru ụlọ ọrụ gị ma mechaa gbanwee ha ka ha bụrụ ndị ahịa?
Maka azụmaahịa enweghi obere uru inwe ọtụtụ puku ndị na-eso Twitter ma ọ bụrụ na ọnweghị onye na-azụ gị. Ọ na-agbada iji nweta nsonaazụ nha na ịchọpụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ihe ị na-arụ na-arụ ọrụ.
Na Mmasị Na Mkparịta ụka anyị na-elekwasị anya na ịchọta ụzọ kacha mma iji tụọ ihe ịga nke ọma, anyị na-eme ya site na ịche ọkwa dị iche iche nke njikọ aka. Aka nri nke On Right na-arụ ọrụ niile na mmekọrịta ya na akara gị. Anyị na-atụle ntinye aka na mmekọrịta mmadụ na ibe anyị.
Ka anyị lelee email dị ka ihe atụ. Na-eziga atụmanya gị kwa ọnwa email akwụkwọ akụkọ. Onye obula meghere ya nweta isi. Ọ bụrụ na ha pịa njikọ dị na email nke ahụ bụ isi ihe ọzọ. Ọ bụrụ na ịga na webpage gị, ha na-enweta isi ihe. Ndị nnata nwere ọtụtụ ihe bụ ndị na-etinyekarị aka.
Nchịkọta Twitter ọhụrụ nke ziri ezi na-eweta otu echiche ahụ na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Site na nyochaa ihe omume niile na-eme gburugburu akaụntụ twitter nke anyị na-enwe ike ịdọrọ ọrụ ahụ n'ime igwe injin nke Right On ma nye ụkpụrụ ụkpụrụ dị iche iche nke itinye aka.
Ihe kpatara ROI's Social Scoring ji dị iche
Imirikiti ngwaahịa ndị dị ugbu a na Twitter dị n'ebe ahụ bụ ngwaahịa ampilifaya. Post biputere ihe na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ma nwee olile anya na ọ ga - enweta retweets ka ọ nwee ike iru ndị na - ege ntị. Ọ dịka ịtinye mpempe akwụkwọ n'okporo ụzọ awara awara ma nwee olile anya na ọtụtụ mmadụ ga-ahụ ya.
Na nri mmekọrịta, anyị lekwasịrị anya na isi na itinye aka, ọ bụghị nkwalite. Anyị nwere mmasị ịkọwapụta na akara akara mgbama. Site n'inyere ndị ahịa aka ịghọta mgbalị mgbasa ozi mgbasa ozi ha na-eme, ha nwere ike hụ ngwa ngwa ụzọ kachasị dị irè.
ROI si Social Scoring bụ n'ụzọ zuru ezu Customizable
Njikọ ahụ na-adọta data niile gbara akaụntụ Twitter dị ka ndị na-eso ụzọ ọhụrụ, akara aka, retweets na ozi ziri ezi. Enwere ike ekenye nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a, yana marketer na-achịkwa akara ahụ. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu customizable.
Dịka ọmụmaatụ, onye na-eso ụzọ ọhụụ nwere ike ịnata otu isi. Ntugharị nwere ike ịba uru abụọ. Ọ bụrụ na atụmanya na-eziga akaụntụ ahụ nke nwere ike ịba uru 10. Ndị na-ere ahịa nwere ike ekenye ụkpụrụ itinye aka na ọrụ ha chere na ha kachasị mkpa ma baa uru.
Chọpụta Ọchịchị na-ekpo ọkụ site na ROI Social Scoring
Ntughari Twitter ohuru bu ugbua ihe omuma nke Aka nri nke On nri. Ọ na - ahapụ gị ka ị gbanwee ndị na - eso ụzọ na - enweghị aha n’ime kọntaktị na nchekwa data ụlọ ọrụ gị. Ijikọ kọntaktị Twitter nke ụlọ ọrụ na nchekwa data ya na-enye ndị ahịa azụmaahịa ohere ịkwado akụkụ niile nke njikọ aka gburugburu akara ahụ.
Otu n’ime ihe ndị na-atọ ụtọ na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịmata ndị na-ekpo ọkụ, nke bụ ndị ọrụ ahụ mepụtara ọtụtụ njikọ aka na mmekọrịta na obere oge. Site na ịchọpụta ndị ọrụ ahụ ngwa ngwa, ị nwere ike ịgafe ndị na-ere ahịa ahịa ahụ ozugbo.
Ọ bụ naanị otu ụzọ ọzọ nke ziri ezi na mmekọrịta na-enyere ndị azụmaahịa aka ị nweta ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta.
Right On Interactive bụ ahịa akpaaka onye nkwado maka Martech Zone.
Tags: akara facebookndu akaranjikọ njikọatụmanya isinri na mmekọrịtaakara mmekọrịtaakara twitter